SamsungGalaxy Note8 (4G) - အနက်ရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Samsung Galaxy Note8 (4G) - အနက်ရောင်
Galaxy Note8 (4G) - အနက်ရောင်
Galaxy Note8 (4G) - ရွှေရောင်
Rear Camera - Dual camera, Digital zoom up to 10X
2017 အောကျတိုဘာ 21
အတော်ကောင်းတယ်ဗျ မပြောပြတတ်အောင် အားလုံးအဆင်ပြေတယ် ကြိုက်တယ်ဗျာ !! နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2017 အောကျတိုဘာ 10
The only downside of this smartphone would be its price as it isalittle bit expensive but it justifies itself with many features inclusive. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ပုံရိပ်များနဲ့ ဆက်သွယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။ Galaxy Note 8 လေးနဲ့သာဆိုရင် ဆန်းသစ်ကြီးမားတဲ့ အရာတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ သင်စောင့်စားနေရတော့မှာပါ။ Screen ပိုမိုကျယ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ နေရာပိုမိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Note device တွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံး Screen ဖြစ်နေပေမယ့် သင့်ရဲ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ဆောင်ဖို့အတွက် အနေတော်ဖြစ်နေမှာပါ။
အများနဲ့မတူ ထူးခြားမှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် Note 8 ရဲ့ S Pen ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။ S Pen လေးကို အသုံးပြုပြီး မက်ဆေ့ခ်ျပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ခံစားချက်ကို ပြသပေးမယ့် ကိုယ်ပိုင် emojis လေးတွေကို ရေးဆွဲလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ရေးစာသားလေးအဖြစ် ပေးပို့လိုက်ပါ။
မှေးမှိန်တဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာတောင် ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး တည်ငြိမ်သက်ဝင်သော ရုပ်ပုံများ
အမှောင်ယံချိန်မှာ ကြည်လင်တဲ့ ပုံများကိုရရှိဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ Galaxy Note 8 ရဲ့ Dual camera မှာ wide-angle ပါဝင်တဲ့အတွက် အလင်းရောင်အားနည်းချိန်မှာတောင် ကြည်လင်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dual camera ဟာ 2x optical zoom ဖြစ်လို့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေတောင် ပုံများ ဗီဒီယိုများကို တိကျပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာ၂ခုစလုံးမှာ optical image stabilization ပါဝင်လို့ zoom ဆွဲတဲ့အချိန်မှာတောင် တည်ငြိမ်ပြတ်သားမှုကို ပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းတွေကိုပဲ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲဆွဲ တခြား task တွေကိုပဲလုပ်လုပ် Galaxy Note8 ဖုန်းလေးနဲ့ဆို စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာ လျှင်မြန်နေမှာပါ။ သူ့မှာ လုပ်ဆောင်ချက်မြင့်မားတဲ့ 10nm mobile processor နဲ့ 6GB RAM ပါဝင်လို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် wireless charging ဖြစ်လို့ ပိုမိုအဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy Note8 ဟာ သင့်ကို ကမ္ဘာလောကအသစ်တစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။ Note8 လေးနဲ့ အတားအဆီးတွေကို ချိုးဖျက်လိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေများစွာကို အခက်အခဲမရှိ အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
ရွှေ့ပြောင်းခြင်းတစ်ခုပြုလုပ်တာဟာ ကြီးမားတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တွန့်ဆုတ်နေစရာမလိုပါဘူး။ Smart Switch ဟာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းအဟောင်းထဲ အရာများအားလုံးကို ဖုန်းအသစ်စီ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလုပ်အောင် လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲ ပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အဆက်အသွယ်များ၊ settings များ၊ မတ်စေ့ခ်ျများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနဲ့ application များကိုပါ မူရင်းအတိုင်းဖြစ်အောင် ရွှေ့ပြောင်းပေးပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Galaxy Note8 (4G) - အနက်ရောင်